China SPC Floor 1901 Ukwakha kanye Factory | I-Aolong
Umehluko phakathi kwe-LVT floor / SPC floor / WPC floor
Imboni yokwakheka komhlaba ithuthuke ngokushesha kule minyaka eyishumi edlule, futhi sekuvele izinhlobo ezintsha zaphansi, ezinjenge-LVT flooring, i-WPC Wood flooring kanye ne-SPC flooring plastic. Ake sibheke umehluko phakathi kwalezi zinhlobo ezintathu zaphansi.
Isitezi se-1 LVT
1. Isakhiwo sephansi se-LVT: isakhiwo sangaphakathi sesitezi se-LVT ngokuvamile sifaka ungqimba wepende we-UV, ungqimba ongagqoki, umbala wesendlalelo sefilimu no-LVT medium base layer. Ngokuvamile, ungqimba oluphakathi nendawo lwakhiwa izingqimba ezintathu ze-LVT. Ukuze uthuthukise ukuzinza kobuso phansi, amakhasimende azodinga ukuthi ifektri ingeze ingilazi i-fiber mesh kusendlalelo se-substrate ukunciphisa ukwehla phansi okubangelwa izinguquko zokushisa.
2 WPC phansi
1. Isakhiwo saphansi se-WPC: Iphansi le-WPC liqukethe ungqimba wopende, ungqimba ongagqoki, umbala wesendlalelo sefilimu, ungqimba lwe-LVT, ungqimba we-WPC substrate.
3 SPC phansi
Sakhiwo SPC phansi: okwamanje, SPC phansi emakethe kuhlanganisa izinhlobo ezintathu, ungqimba olulodwa SPC phansi nge kufanelekile inthanethi, AB isakhiwo kuhlangene LVT futhi SPC futhi SPC phansi esiyinhlanganisela ABA isakhiwo. Lesi sibalo esilandelayo sikhombisa ungqimba olulodwa lwesakhiwo saphansi se-SPC.
Ngaphezulu umehluko phakathi kwesitezi se-LVT, phansi kwe-WPC nesitezi se-SPC. Lezi zinhlobo ezintathu ezintsha zaphansi empeleni zitholakala ku-PVC floor. Ngenxa yezinto ezikhethekile, izinhlobo ezintathu ezintsha zephansi zisetshenziswa kakhulu uma ziqhathaniswa naphansi, futhi ziyaziwa ezimakethe zase-Europe naseMelika. Imakethe yasekhaya isazokwandiswa
Langaphambilini Isitezi se-SPC 503
Olandelayo: Isitezi se-SPC 1902
Isitezi se-SPC 1905
Isitezi se-SPC 1908
Isitezi se-SPC 1907
Isitezi se-SPC 1913